काठमाडौंको बसपार्कमा यौ,न बजारः रात परेसँगै प्र’ह”रीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ (भिडियोमै हेर्नुस्)
February 6, 2022 February 6, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on काठमाडौंको बसपार्कमा यौ,न बजारः रात परेसँगै प्र’ह”रीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ (भिडियोमै हेर्नुस्)
रत्नपार्क राजधानीको मुटु हो । यहाँ अफिस टाइम तथा साँझको समयमा मानिसहरुको बाक्लै रुपमा हिँडडुल गर्छन् । फुटपाथमा साना पसल थाप्नेदेखि घर फर्कन गाडी कुर्नेहरुको लाम पनि रत्नपार्कमा देखिन्छ ।केही वर्षअघि अहिले सञ्जालमा लोकप्रिय मुकुन्द घिमिरे उर्फ ‘मुकुन्दे’ले रत्नपार्कलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका थिए । उनी रुखमा बसेर भाषण गर्थे । उनको भाषण सुन्ने मानिसहरुको […]
यस्तो अच’म्मको पर’म्परा नेपालमै: ‘जहाँ विवाह’पछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो स’म्भोग ग’र्नुपर्छ’
February 2, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on यस्तो अच’म्मको पर’म्परा नेपालमै: ‘जहाँ विवाह’पछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो स’म्भोग ग’र्नुपर्छ’
डोल्पा । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यस्तो अचम्मको परम्परा हाम्रै नेपाल’मा छ। माथिल्लो डोल्पाका केही गाउँपालिका लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बहुपति र पाण्डु प्रथा अझै कायम छ  । तिब्बती संस्कार प्र’चलनमा रहेका क्षेत्रमा त्यस्ता पु’राना प्रथा हट्न सकेको छैन । घरमा जेठो दाजुले विवाह गरेपछी जतिसुकै दाजुभाइ भए पनि जेठो दाजुले विवाह गरेको श्रीमतीलाई नै […]
लुम्बिनीमा पैंतीस वर्षदेखि निरन्तर कसरी बलिरहेको छ शान्तिदीप ?
February 1, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on लुम्बिनीमा पैंतीस वर्षदेखि निरन्तर कसरी बलिरहेको छ शान्तिदीप ?
काठमाडौ : गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिरको केही मिटर उत्तरतर्फ लाग्दा एउटा ठूलो खालको पालामा बत्ती बलिरहेको देखिन्छ। सो बत्तीलाई शान्तिदीप भन्ने गरिएको छ। अहिले सोही बत्तीलाई बीचमा पारेर दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ १,६०० मिटर लम्बाइ र १६ मिटर चौडाइको नहर बनाइएको छ। लुम्बिनी विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजनामा यस्तो नहर बनाउने योजना भए पनि त्यहाँ […]
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ सामान्य गल्ती ! पूरा पढ्नुहोस्।
June 30, 2021 June 30, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ सामान्य गल्ती ! पूरा पढ्नुहोस्।
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन रु वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा मानिसलाई कहिल्यै धनसम्पति, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुँदैन। यस्तोमा देवि लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने […]
भ्वाइस अफ नेपालको कोच, कसले कति पारिश्रमिक पाउछन् ? (हेर्नुहोस)
June 28, 2021 June 28, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on भ्वाइस अफ नेपालको कोच, कसले कति पारिश्रमिक पाउछन् ? (हेर्नुहोस)
नेपालको चर्चित रियालिटी शो कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ भन्दा फरक नपर्ला ।फ्रेन्चाईज शो भएर पनि होला यसको छुट्टै क्रेज छ । स्टेजको आकर्षण, कोचको रुपमा चर्चित गायकहरुको उपस्थिति र निखारिएका प्रतिस्पर्धीहरुको कारणले पनि शोको शान बढाएको छ । यति धेरै चर्चित रहेको रियालिटी शोमा जजहरुको प्रति एपिसोड पारिश्रमिक कति होला […]
March 6, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on शौचालयमा मोबाइल चलाउने बानी छ भने आजैबाट छाट्नुहोस यो बानी यस्तो सम्म खत्रा हुनसक्छ
आजकल अधिकांश मानिसहरू शौचालय जाँदा साथमा मोबाइल लिएर जाने गर्छन् ।गेम खेल्न, फेसबुक चलाउन, च्याट गर्नलगायतको लागि मानिसहरू शौचालयमा मोबाइल लिएर जाने गर्छन् । तर, चिकित्सकहरूका अनुसार शौचालयमा मोबाइलको प्रयोगले पायल्सको समस्या निम्त्याउन सक्छ । यो समस्या स्मार्टफोनको प्रयोगले भन्दापनि मोबाइल चलाएर लामो समयसम्म शौचालयमा बस्नुलाई मानिन्छ ।मानिसहरू ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने सुरमा अरु समयमा भन्दा […]
March 1, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on घरनजिकै हिँड्दै गर्दा ३ करोड रुपैयाँको डल्लोमा ठे’स लाग्यो, छिमेकीले मूल्य भन्दा सातो गयो
काठमाडौं। एक महिला आफ्नो घरनजिकै हिँड्दै गर्दा उनलाई एउटा डल्लोमा ठे’स लाग्यो । उनलाई त्यो डल्लो के हो भन्ने थाहा भएन । तैपनि उनले त्यो डल्लोले आफ्नो लागि केही पैसा दिलाउन सक्ने आशामा त्यसलाई घि’सार्दै आफ्नो घरनजिकै लिएर गइन् । जब उनले त्यो डल्लोको मूल्य थाहा पाइन् त्यसपछि भने उनको सा’तो गयो । डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार […]
February 27, 2021 February 27, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on के रातभर मोबाइल चार्जमा राख्नु गलत हो
के तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई रातभर चार्जमा लगाएर छोड्नुहुन्छ ? के यसो गर्दा ब्याट्री खराब त हुँदैन ? वा ब्याट्रीको आयू त छोटिँदैन ? स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई सकेसम्म धेरै लामाे समयसम्म टिकाउ हुने गरी प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छ ? यस विषयमा यस्तै कयौँ जिज्ञासा र भ्रमहरू विद्यमान छन् । उसो भए वास्तविकता के हो त ? आज […]
देशका ४ सहरबाट फाइभजी परिक्षण गर्दै टेलिकम
February 23, 2021 February 23, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on देशका ४ सहरबाट फाइभजी परिक्षण गर्दै टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका ४ ठूला सहरबाट द्रुतगतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा फाइभजी परीक्षण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । नेपाल टेलिकमका सह–प्रवक्ता रञ्जित लोहियाका अनुसार टेलिकम फाइभजी फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको पर्खाइमा रहेको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको कार्य सम्पन्न भएसँगै निर्देशन […]